Izindaba - Ubuhle be-Aluminium Form Work
1. Ukusebenza okuphezulu kokwakha kanye nomjikelezo omfushane: Uhlelo lokwakha ifomu le-aluminium luhlelo lokukhipha olusheshayo, olungasuswa emahoreni angama-18-36, ngakho-ke kuphela ungqimba olulodwa lwe-aluminium formwork kanye nezendlalelo ezintathu zokusekelwa okukodwa okudingekayo ukuhlangabezana izidingo. Ukwakhiwa okujwayelekile kungasetshenziswa. Kuze kube yizinsuku ezingama-4-5 zesitezi sokuqala, ngaleyo ndlela kuncishiswe kakhulu isikhathi sokwakha, konga izindleko zokuphatha zophiko lokwakha, nokunciphisa umjikelezo wentuthuko yabathuthukisi bezezakhiwo.
2. Izindleko ezisebenzisekayo neziphansi: Zonke izesekeli zohlelo lwe-aluminium formwork zingasetshenziswa futhi. Uhlelo lwe-aluminium alloy formwork lusebenzisa i-extrusion ebalulekile ukwenza amaphrofayli we-aluminium alloy njengezinto zokusetshenziswa (6061-T6). Iqoqo lezincazelo zefomu lingaguqulwa futhi lisetshenziselwe izikhathi ezingaphezu kwama-300. Izindleko eziphansi zokusetshenziswa.
3. Ukwakhiwa okulula nokusebenza kahle: Uhlelo lwe-aluminium formwork lulula futhi lulula ukuhlangana. Kudinga kuphela ukukhulisa ibhodi elijwayelekile ngokulingana ngesikhathi sokufakwa. I-aluminium formwork ilula ngesisindo esingu-18-25 kg ngemitha eyisikwele. Inqubo yokwakha ihlanganiswe ngokuphelele futhi ihanjiswe ngesandla, futhi ayinciki ekuphakamiseni imishini yeMechanical (abasebenzi ngokuvamile badinga kuphela isikrufu noma isando esincane, esikahle futhi esheshayo). Abafaki bangafaka ama-20-30 square metres umuntu ngamunye ngosuku (izifaki ze-aluminium formwork zingagcina u-30% uma kuqhathaniswa nefomu elenziwe ngokhuni, futhi akudingeki ochwepheshe. Kwanele ukwenza ukuqeqeshwa okulula kwabasebenzi bokwakha ihora eli-1 ngaphambi kokufakwa) .
4.Ukuzinza okuhle nomthamo ophakeme wokuthwala: Uhlelo lwe-aluminium formwork lonke luhlanganiswe yi-aluminium formwork. Ngemuva kokuthi uhlelo luhlanganisiwe, luzokwakha ifreyimu ephelele enokuqina okuhle. Umthamo wokuthwala ungafinyelela kuma-60KN ngemitha eyisikwele, futhi azikho izingozi zokukhulisa isikhunta ezizokwenzeka. .
5. Izicelo ezahlukahlukene: Uhlelo lwe-aluminium formwork lulungele zonke izinto zokwakha, njengezindonga ezithwala imithwalo, amakholomu, imishayo, ama-slabs aphansi, izitebhisi, kuvulandi, njll., Okungagcwaliswa ngosimende othela ngasikhathi sinye.
6. Umphumela omuhle wobuso bukakhonkolo ngemuva kokudilizwa: Ngemuva kokucekelwa phansi kwe-aluminium formwork, ikhwalithi yokhonkolo ibushelelezi futhi ihlanzekile, engakwazi ukuhlangabezana nezidingo zokuqeda ukhonkolo nobuso obunobulungiswa ngaphandle koku-plaster, okungagcina izindleko zokufaka upulastikhi wesibili.
7. Ayikho imfucuza yokwakha esizeni, ukwakhiwa okuphephe kakhulu: Zonke izingxenye ze-aluminium formwork zingasetshenziswa kabusha, akukho doti esizeni ngemuva kokudilizwa, akukho ukugqwala, akukho ngozi yomlilo, akukho nzipho zensimbi esizeni sokufakwa, azikho izinkuni i-chainsaw Wooden dowels kanye nezinye izinsalela zokwakha, indawo yokwakha ihlanzekile, futhi ngeke ikhiqize inqwaba yemfucuza yokwakha njengokusebenzisa ifomu lokhuni. Ihlangabezana ngokugcwele namazinga okwakhiwa kwezakhiwo eziluhlaza. Ngokusebenzisa amaphaneli angasindi, kungaqinisekisa ukuthi abakhi bangasebenza ngokuphepha kuma-panels. 8.Ukwenziwa kwesikhathi esisodwa, ukucacisa okuphezulu, kanye nokusebenza ngokuqinile: Ngokwemidwebo yokwakha, ukwakheka kwesikhathi esisodwa, ukuthululwa okubalulekile, ukwakhiwa okuqinile, amaphutha amancane nokunemba okuphezulu, ukuqinisekisa amandla nokuphila kwensizakalo kwebhilidi, kakhulu ifanele ukuphakama okujwayelekile, izakhiwo eziphakeme kakhulu kanye Nezakhiwo eziningi zohlobo olufanayo lwasekhaya, ifomu le-aluminium lingahlanganiswa ngemininingwane ehlukile yamapuleti ngokusho kwephrojekthi. Lapho ifomu elisetshenzisiwe lakhiwa kabusha esakhiweni esisha, kuphela amaphesenti angama-20% wamapuleti angajwayelekile adinga ukushintshwa.
9. Izinga eliphakeme lokutakula nenani elikhulu lokusalela: Izinto zokwenziwa kwe-Aluminium ingabuye isetshenziswe kabusha ngaso sonke isikhathi. Ngemuva kokuthi uhlelo lwe-aluminium formwork selusuliwe, lapho ukwelashwa kwemfucuza kunenani eliphezulu lokusalela, konke okokusebenza kwe-aluminium formwork yizinto ezivuselelekayo, ezihambisana nokongiwa kwamandla kazwelonke, ukuvikelwa kwemvelo, kanye ne-Low-carbon, imithethonqubo yokunciphisa ukungcola, nokusimama izinqubomgomo zezimboni.
10. Zimbalwa izinhlelo ezisekelayo nokuhamba kalula: Ngezindlela zokwakha zendabuko, i-slab floor, ipulatifomu namanye amasu wokwakha amafomu ngokuvamile asebenzisa amabakaki agcwele phansi, aqeda abasebenzi nezinto zokwakha. Uhlelo lokusekela olungezansi lwefomu le-aluminium alloy lisebenzisa ukwesekwa kwe- "single-pipe vertical vertical", ngebanga elijwayelekile lamamitha ayi-1.2, asikho isidingo sokwesekwa okuvundlile noma okuthambekele kokusekelwa, isikhala esikhulu sokusebenza, abasebenzi bezokwakha, ukuphatha izinto ezibushelelezi, futhi kulula futhi ukususwa okulula kokusekelwa okukodwa. Kulula ukuphatha.